? Beddelka BILAASH ee PowerPoint (2021) - Tilmaamaha Teknolojiyada | Golaha Moobaylka
Beddelka ugu fiican ee bilaashka ah ee PowerPoint
Ignacio Sala | | Microsoft PowerPoint, Qalabka otomaatiga
Haddii aan ka hadalno Powerpoint, waa inaan ka hadalnaa arjiga halyeeyga adduunka ee xisaabinta si loo abuuro bandhigyo, codsi ay abuurtay shirkadda Forethought Inc, oo markii hore la baabtiisay sida Kormeeraha oo loogu talagalay barnaamijka 'Mac'. Dhammaadkii 1987 Microsoft ayaa iibsaday, la qabsatay Windows, magaceedana u beddelay Powerpoint oo lagu daray Xafiiska sida aan maanta ku naqaano.
Powerpoint waxaa si weyn looga isticmaalaa qaybta ganacsiga, waxbarashada iyo dhinacyada gaarka loo leeyahayba. Waxay u timid suuqa si loo buuxiyo cilladaha ereyga loo soo bandhigay si loo soo bandhigo wixii markaa ka dambeeyayna waxay noqotay halbeeg lagu mahadiyo sahlanaanta adeegsiga iyo tirada badan ee howlaha sida kudar qoraallo majaajillo ah iyo sawirro, fiidiyowyo, sawir gacmeedyo, iskudhafyo ...
Sida loo abuuro kalandarkaaga gaarka ah ee ereyga
Mid ka mid ah awoodaha ay Powerpoint na siiso ayaa ah isdhexgalka Office 365, oo ah barnaamijyada Microsoft halkaasoo aan sidoo kale ka helno Word, Excel, Outlook, Access oo loo heli karo labadaba codsi desktop iyo shabakadba. Office 365 wuxuu ku shaqeeyaa rukunka suurto galna maaha inaad iibsato codsiyada si madaxbanaan ama wadajir, taas oo macnaheedu yahay inaad bixinayso bil kasta.
Microsoft waxay noo siineysaa qorshooyin kala duwan, shaqsiyaadka iyo shirkadaha labadaba wax yarna 7 euro bishii, 59 euro sanadkii, waxaan ku raaxeysan karnaa dhamaan barnaamijyada Office 365 ee ka socda kombiyuutarkayaga ama biraawsarka, marka lagu daro ku raaxeysiga 1 TB ee kaydinta daruurta ... Haddii aad si joogto ah ugu isticmaasho mid ka mid ah barnaamijyadan a rasmi ah, waa inaad tixgelisaa rukunka inaad ku raaxeysato dhammaan faa'iidooyinka ay na siiso.
Laakiin haddii isticmaalkaaga Powerpoint uu yahay mid goosgoos ah, sida kan loo yaqaan 'Word' ama 'Excel,' sida iska cad rukunka ayaan ku siinaynin wax lacag ah, iyadoo aan loo eegin sida ay u jaban tahay. Haddii tani ay tahay kiiskaaga, markaa waxaan ku tusaynaa kuwa ay yihiin beddelka bilaashka ah ee ugu fiican Powerpoint.
1 Soojeedinta Google
4 Show Zoho
Haddii aad si joogto ah u isticmaasho Google, waxay u badan tahay inaad la kulantay qalabka Google ee codsiyada xafiiska otomaatiga loo yaqaan Google Suite. Qaybtan oo ah barnaamijyo ay qaabeeyeen Google Docs, Google Sheets iyo Google Slides, ayaa lagu dhex daray Google Drive y waxay noo ogolaaneysaa inaan sameysano dukumiinti qoraal ah, xaashiyaha iyo bandhigyada gebi ahaanba bilaash ah iyada oo loo marayo biraawsar (haddii uu ka fiican yahay Chrome).
Bandhigyada Google waxay noo ogolaaneysaa inaan si dhakhso leh oo fudud u abuurno bandhigyo (iska cafiyo shaqo la'aanta) sameynta isticmaalka sawirada iyo fiidiyowyada aan ku keydinay Sawirada Google. Dhibaatada ugu weyn ee bandhigyada Google ay na siiso waa xulashooyinka, maaddaama tiradooda ay aad u yar tahay oo kaliya ay na siiso howlo aasaasi ah, laakiin ku filan inta badan dadka guryaha isticmaala.
Si loo abuuro bandhig iyada oo la adeegsanayo adeeggan, waa inaan galnaa koontadayada Google Drive, dhagsii kuwa cusub, xulo bandhigyada Google oo aan bilowno ku darista qoraalka, sawirrada iyo fiidiyowyada aan dooneyno inaan muujino. Qaabka Google Slides lama taageerayo mana ahan Powerpoint ama codsi kale oo noo ogolaanaya inaan abuurno bandhigyo.
iWork waa xafiiska macOS, nidaamka hawlgalka Mac, laakiin wuxuu kaga duwan yahay xalka Microsoft, midkani gabi ahaanba waa bilaash. iWork waxaa qaabeeyey Bogag (Erey), Tirooyin (Excel) iyo Muhiim (Powerpoint). Muhiimka, oo lagu turjumay luqadda Cervantes waxaa loola jeedaa Soo Bandhigid, waxay na siisaa a qalab aad u dhameystiran si loo abuuro bandhigyo dhammaan noocyada, halkaas oo aan ku dari karno sawirrada fiidiyowyada iyo sidoo kale sawirada, qoraallada animated ...
Muhiim, sida codsiyada intiisa kale ee laga heli karo gudaha iWork, waxaa loo heli karaa barnaamij ahaan loogu talagalay macOS, macruufka, iyo sidoo kale iyada oo loo marayo icloud.com, Adeegga daruuraha ee Apple. Haddii aadan ahayn isticmaale Apple, laakiin aad rabto inaad tijaabiso codsigan, waad sameyn kartaa iyada oo loo marayo degelkeeda, waxaa loo baahan yahay oo keliya in mid la yeesho Aqoonsiga Apple.
Qaabka bandhigyada aan ku abuureyno Muhiimka ayaa kaliya la jaan qaadi kara codsigan, hase yeeshe, oo ka duwan bandhigyada Google, waxay noo ogolaaneysaa inaan u dhoofino shaqadeena qaabka .pptx, qaabka ay adeegsatay Powerpoint.
Bedel kale gabi ahaanba waa bilaash Qaab codsi ah, waxaan ka helnaa codsiyada xafiiska ee LibreOffice ay noo soo diyaarisay. Xafiiska Libre waxaa qaabeeyey Qoraa (Erey), Calc (Excel), Impress (Powerpoint), Saldhig (Gaaritaan) iyo sidoo kale tifaftire qaacido iyo matoor jaantus ah.
Muuqaalku waa xal dhammaystiran oo dhammaystiran taas oo u baahan rakibaadda qaybta dalabka, kuma rakibi karno si madax-bannaan. Naqshadayntu waxay aad ugu egtahay Powerpoint, markaa haddii aan u baranay adeegsiga barnaamijkan Microsoft, ma seegi doonno.
Marka laga hadlayo xulashooyinka jira, Impress malaha wax ay ka masayrto codsi kale, maaddaama ay noo oggolaaneyso inaan ku darno qoraallada (waxaan ku qaabeyn karnaa kumanaan siyaabood), fiidiyowyo, sawirro, jaantusyo, miisas, muuqaallo garaafyo ah ..., iyo sidoo kale noo oggolaanaya inaan dhisno oo aan xakameyno muuqaalka 3D iyada oo ay ugu mahadcelinayaan tirada badan ee horay -waxaa la qorsheeyay xubno.
Impress ayaa la jaan qaada Powerpoint, maahan oo kaliya markii la furayo faylasha fidinta .pptx, laakiin sidoo kale marka la dhoofinayo shaqada aan abuurnay. Ikhtiyaar ay tahay inaan tixgalino maaddaama qaabka LibreOffice ee asalka ahi uusan u dhigmin Powerpoint ama mid ka mid ah codsiyada ay bixiso Office 365.
Asal ahaan, waxay ka dhigeysaa tiro badan oo arrimo ah oo annaga nala heli karo. Haddii sheybaaradaasi aysan ku habboonayn baahideenna, waan awoodnaa kala soo bixi arrimo badan laga bilaabo keydka template LibreOffice.
LibreOffice waa la heli karaa aad u badan Windows sida loogu talagalay macOS iyo Linux. Si aan ugu isticmaalno arjiga Isbaanishka, waa inaan kala soo baxnaa arjiga marka hore iyo ka dibba (waxay na siineysaa ikhtiyaar), soo degso xirmada luqadda, xirmo ay tahay inaan rakibo isla marka aan rakibno LibreOffice.
Show Zoho waa bedelka ugu fiican ee bilaashka ah Powerpoint dhawr sababood awgood. Dhinaca kale, halkii lagugu qasbi lahaa inuu ka shaqeeyo shabakadda sida inta badan beddelka aan ku tuso qodobkan, fiyada oo loo marayo kordhinta Chrome (Waxaan sidoo kale isticmaali karnaa Edge Chromium).
Qodob kale oo wanaagsan oo aan ka helno Zoho ayaa ah inay noo ogolaato bandhigyadayada ku samee Apple TV, Android TV, iPhone, iPad, Android ama Chromecast, taas oo naga badbaadin doonta inaan la halganno fiilooyinka, qaabeynta iyo isku xirnaanta.
Zoho wuxuu taageeraa Powerpoint, waxayna noo ogolaaneysaa inaan ka soo dhoofsanno faylasha codsigan si aan ula shaqeyno iskaashi lala yeesho dadka kale. Marka laga hadlayo xulashooyinka ay bixiso, Zoho wuxuu noo oggolaanayaa inaan ku darno qoraalka (waxaan u qaabeyn karnaa kun siyaabood), sawirro, qaabab tiro badan (sanduuqyo, saddexagallo, iskutallaabno, xabbo ...), miisas, muuqaallo iyo xitaa maqal iyo fiidiyowyada fiidiyowga ah ee laga helo YouTube.
Iyadoo Zoho, waxaan sidoo kale awoodnaa tafatir sawirada mar haddii aan ku darno soo bandhigida, waa shaqo dedejineysa shaqada iyada oo laga fogaanayo in la mariyo sawirrada aan dooneyno inaan u adeegsanno tifaftiraha. Animations sidoo kale waa mid ka mid ah awoodaha ay Zoho na siiso, animations kaas oo aan ku muujin karno qodobbada muhiimka ah, abuurista sheekooyinka ...
Haddii aad raadineyso tusaalooyin leh mowduucyo gaar ah, xalka ay Slidebean na siiso wuxuu noqon karaa midka aad raadineyso. Slidebean wuxuu na siiyaa marin bilaash ah nooca aasaasiga ah, nooc ka mid ah helitaanka tiro aad u tiro badan arrimo lagu abaabulay mawduuc, taas oo noo oggolaan doonta inaan ku abuurno bandhigyadeenna qaab aad uga fudud sidii aan uga soo bilaabi lahayn xoqida ama ku saleysan qaabab fudud.
Si ka duwan websaydhada kale ee noo oggolaanaya inaan abuurno bandhigyo, Slidebean ayaa na siinaya helitaanka dhammaan waxyaabaha ku jira warbaahinta badan in ay ku bixiso noocyada la bixiyay, markaa xadka marka la abuurayo bandhigyada waxay ku jirtaa mala-awaalkaaga iyo waqtiga ay tahay inaad awood u yeelatid inaad hubiso tirada badan ee ka kooban waxyaabo badan oo warbaahin ah oo ay na siiso.
Canva waa dhowr waxyaalood oo lagu beddeli karo Powerpoint iyada oo loo marayo webka aan gacanta ku hayno. In kasta oo uu qorshe u leeyahay shirkado, nooca dadka isticmaala guryaha waa bilaash oo wuxuu naga dhigayaa in ka badan 8000 oo arrimo ah, 100 nooc oo naqshadeyn ah iyo boqolaal kun oo sawirro ah iyo waxyaabo garaaf ah oo aan ku dari karno bandhigyadeenna.
Bandhigyada noo oggolaanaya sameynta bog, waxaan ku dhoofin karnaa PDF, JPG, qaab PNG iyo qaab soo bandhigid ah oo aan kula wadaagi karno shabakadaha bulshada. Waxay sidoo kale noo ogolaaneysaa inaan ku wada shaqeyno isla dukumintiga dadka kale, ku darno faallooyinka iyo xitaa 1 GB oo keyd ah si aan u soo bandhigno.
Canva kaliya nama ogolaato bandhigyada, laakiin sidoo kale waxay noo ogolaaneysaa inaan abuurno album ama buugga daboolan, boorar, shahaadooyin, madax-waraaqo, joornaallo, dib-u-bilaabid, buugaagta sannad-dugsiyeedka, kaararka ganacsiga, barnaamijyada dhacdooyinka, kaararka aqoonsiga, kaararka sheekooyinka, buug-yaraha, xaashiyaha, kalandarrada ...
Jiid waa beddelka xiisaha leh ee bilaashka ah ee Powerpoint ee loogu talagalay dadka isticmaala guryaha. Sida Canvas oo kale, waxay noo ogolaaneysaa inaan ku wada shaqeyno isla dukumintiga dadka kale, la wadaagno bandhigga adoo adeegsanaya xiriiriyaha shabakadda ilaalinta helitaanka lambarka sirta ah, u dhoofi mashruuca qaab PDF ah ...
Beddelkaan waxaa loogu talagalay inuu la falgalo dadka daawada, kuna martiqaadaya inay doortaan su'aalaha iyo jawaabaha su'aalaha, waxay muujiyaan natiijooyin kala duwan marka lagu daro u oggolaanshaha abuuritaanka sahanno shaqsiyeed, ahaansho ku habboon ganacsiga iyo bay'ada ardayda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Qalabka otomaatiga » Beddelka ugu fiican ee bilaashka ah ee PowerPoint
Sidee loo ogaadaa IP-ga PC-ga?
Muxuu Chrome aad u gaabis yahay? Sida loo xaliyo